facebook မှာကောင်မလေးပုံတွေတင်ပြီးမိုက်ရိုင်း လူမျိုးရေး/ဘာသာရေးကိုစော်ကားသူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures » facebook မှာကောင်မလေးပုံတွေတင်ပြီးမိုက်ရိုင်း လူမျိုးရေး/ဘာသာရေးကိုစော်ကားသူ
facebook မှာကောင်မလေးပုံတွေတင်ပြီးမိုက်ရိုင်း လူမျိုးရေး/ဘာသာရေးကိုစော်ကားသူ
- ၿမိဳ႕ ေဟာင္းသား
Posted by ၿမိဳ႕ ေဟာင္းသား on Aug 6, 2012 in Cultures |7comments
ယုတ်ညံ့ခဲ့ ပါတယ်။ရခိုင်အရေးအခင်းမှာလည်းရိုဟင်ဂျာတွေဘက်ကနေပြီး သွေးထိုးလှူံ့ဆော်ပြီး မြန်မာပြည်မှာနေတာကို
မထောက် အလွန်အောက်တန်းကျခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ အရှိန်လွန်သွားမှန်းသိလို့ သူ့အကောင့်အဟက်ခံရတာပါဆို
ဓါတ်ပုံတွေအတင်ခံရသောကောင်မလေးတွေမှာရှက်လွန်းလို့ အပြင်တောင်မထွက်ရဲကျပါဘူး။အင်မတန်ယုတ်မာတဲ့ လူယုတ်
About ၿမိဳ႕ ေဟာင္းသား
ၿမိဳ႕ ေဟာင္းသား has written 8 post in this Website..
View all posts by ၿမိဳ႕ ေဟာင္းသား →
မြို့ ဟောင်းသား says:
အင်း…အာကာဟိန်းဆိုတာ facebook မှာတွေ ့တာကြာပါပြီ..သူက သန်လျင် GTC ကလို ့ပြောကြတယ်…GTC မှာက ငါးနှစ်တက်ရတယ်..facebookမှာသူ ့ပုံကြီးနဲ ့တင်ပြီးတော့အဲ့လိုတွေပြောနေတာ က ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးနေသလိုဖြစ်နေတယ်..သူတင်ထားတဲ့တချို ့ကောင်မလေးတွေက လဲ GTC ကပဲ
ဲ သူသာ တကယ်အဲ့လိုတင်ခဲ့ရင် ကျောင်းမှာ ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ ့သူကျောင်းတက်မလဲ…အဲ့လောက် အ မယ်မထင်ပါဘူး…ပြောကြတာကတော့သူက facebook တောင်မသုံးတတ်ဘူးတဲ့..သူ ့ကို လုပ်ကြံသွားတာတဲ့…သူ ့ဖက်က လိုက်ပြောနေတာလဲမဟုတ်ပါဘူး..သူ ့ကိုသိလဲမသိပါဘူး..တစ်ခုရှိတာကတော့ အခြေအနေတစ်ခုခု ဖြစ်လာအောင်ရန်တို်က်ပေးနေတာလဲ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်..
ချစ်ရင်ထူး II says:
သေသေချာချာ စုံစမ်းသင့်ပါတယ် .. ဇာဂနာ တို့ အင်တာနက်သုံးတုန်းက ထောင်15 နှစ်တောင် ချ တာဗျ ..
By Taha Siddiqui, Correspondent / August 3, 2012
Pakistanis are mounting protests online and in the streets of cities like Lahore and Peshawar over the ill-treatment of Muslims in Myanmar,asituation that Islamist groups here are distorting to raise money and potentially win recruits.
Islamist groups are exploiting the whipped up sentiments in Pakistan to raise money, ostensibly for the Rohingyas, atatime when political parties are also building up campaign coffers in anticipation of upcoming national elections. One militant Islamist group, the Tehreek-e-Taliban Pakistan, even threatened the Myanmar government, saying it will avenge the blood of Muslims being killed in Myanmar.
Shahzad Ahmad, the Pakistan country director for the global online activism group called Bytes for All, says stories of Muslim victimization around the world are exaggerated in Pakistan by Islamist groups on the Internet.
“They use such campaigns not only to fund themselves but also to gain more political ground and recruit people for their cause. Our research shows that there are many fake photographs being used to propagate [stories of] atrocities against Muslims on many of the Facebook pages which originate from Pakistan,” says Mr. Ahmad.
Nadi Mg says:
အဲဒီ ကောင် ကို တွေ့တာ ကြာပြီ။
ဖေ့ဘွတ်မှာ ပုံတင်ထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ကို ပုံ ကို ကာယကံရှင် မသိအောင် ယူသုံးပြီး ဗမာ ဖာသည်မ တွေ ဆိုပြီး ဆဲဆိုထားပြီး ကလေး နဲ့ အမေ ပုံ ဆိုရင်တောင် ငါနဲ့ ညားတဲ့ ဖာသည်မ ဆိုပြီး ရေးထားတာတွေ တွေ့မိတယ်။ အမှန်တော့ အတော်ယုတ်ညံ့တဲ့ ကိစ္စပါပဲ။
မူလ ပထမ ဖေ့ဘွတ် အကောင့်ပျက်သွားလို့ နောက်ထပ် တခါတောင် ထပ်လုပ်ထားပြန်တဲ့ဟာ ဆိုတော့.. ဘယ်သူမှ ချောက်တွန်းတာ မဟုတ်ဘူး သူ့ဟာ သူ လုပ်တာလို့ပဲ ထင်တယ်။
ကာယကံရှင် အမျိုးသမီးတွေဆို အမှား မလုပ် အပစ်မလုပ်ပဲ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း အရေးခံရတာ ဘယ်လောက်သနားဖို့ကောင်းလိမ့်မလဲ။
မအူကုန်း လမ်းမှာ နေတယ်လို့ ဖေ့ဘွတ်မှာ ရေးထားတာ တွေ့တယ်။